Global Voices teny Malagasy » Ejypta: Mbola any am-ponja ilay bilaogera Abu Fagr na dia eo aza ireo baiko famotsorana miisa valo · Global Voices teny Malagasy » Print
Ejypta: Mbola any am-ponja ilay bilaogera Abu Fagr na dia eo aza ireo baiko famotsorana miisa valo
Voadika ny 25 Janoary 2019 4:41 GMT 1	 · Mpanoratra Noha Atef Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Ejipta, Mediam-bahoaka, GV Mpisolovava
(Lahatsoratra teny Anglisy efa tamin'ny volana Aprily 2009)
Manamarika ny herinandro namoahana ny didy famotsorana faha-valo an'ilay bilaogera Ejipsiana Mos'ad Suleiman Hassan (a.k.a. Mos'ad Abu Fagr) androany; Na dia teo aza izany, dia mbola any amin'ny tobin'ny polisy ao El Arish (Sinai Avaratra) foana i Fagr.
Manana bilaogy antsoina hoe Wedna Ne3eesh  (Te-hiaina izahay) i Fagr, mpikatroka Sinai sady mpanoratra tantara, manoratra momba ireo fitakiana sy ny fiainan'ireo Bedouins ao Sinai , ary ny zo maha-olom-pirenena takian'izy ireo koa izy.
Nosamborina tamin'ny 26 Desambra 2007 i Abu Fagr taorian'ny fikasan'ny governemanta Ejipsiana haka ireo trano ao Rafah sy ny fihetsiketsehana taorian'izany. Nampangain'ny biraon'ny mpampanoa lalàna i Abu Fagr, anisan'izany ny fiampangana ho nitarika fitroarana, fanoherana ny manampahefana, ary fanafihana ireo mpiasam-panjakana am-perinasa. Na dia nandidy ny famotsorana an'i Abu Fagr aza ny fitsarana, dia nanapa-kevitra ny hitazona azy ny mpampanoa lalàna ao El Arish noho fiampangana vaovao voalaza fa namboamboarina tamin'ny volana Febroary 2008, anisan'izany ny fihazonana fitaovam-piadiana tsy misy alalana ary fitondrana fiara tsy misy taratasy fahazoan-dalana hamily fiara.
Hatramin'ny nisamborana azy, dia notazonin'ny polisy ity bilaogera Sinai ity ary avy eo nalefa tany am-ponja. Notazonina voalohany tao El Arish nandritra ny 15 andro izy ary avy eo nafindra tany Ismailia, Toeram-piarovana ao Sinai Avaratra, tobin'ny polisy ao Rafah, ary avy eo indray tao amin'ny tobin'ny polisy El Arish mba hatao fanadihadiana momba ireo fiampangana vaovao, ary avy eo nalefa tany Borg Al-Arab.
Amin'izao fotoana izao, dia ao amin'ny tobin'ny polisy Al-Arish ao Sinai i Mos'ad Abu Fagar, afaka mitsidika azy matetika ny fianakaviany, araka ny voalaza ao amin'ny bilaoginy, izay ny vadiny indray no manoratra tsy tapaka ao. Mitantara ny fitsidihana  nataon'ny vadiny sy ny zanany vavy, Ranad ny bilaogy.
Mitsidika ny dadany isan'andro i Ranad. Hafahafa na dia izany aza, satria fantantsika hoe aiza no itazonana an'i Abu Fagr, satria tsy mahazatra azy ireo ny milaza ny toerana nisy azy. Nanontany ahy i Ranad hoe maninona i dada no tsy mody miaraka amintsika? Ary nanontaniany ny rainy hoe: maninona ianao no tsy mody miaraka aminay, satria eto Sinai izahay, dia tokony hody miaraka aminay izy. Te-hangataka amin'ireo mpiambina mba hamela anay hijanona elaela mandritra ny fitsidihana izy satria 5 minitra fotsiny ny fotoana hiarahana amin'i Abu Fagr! Tsy fantatr'i Ranad fa misy olona mipetraka eny amin'ny seza izay tsy misy atao amin'ny fiainana afa-tsy ny mitady baiko fisamborana ny rainy sy hampiditra azy am-ponja, fonja izay tsy omena ny rariny ny atsasany na ny ankamaroan'ny olona ao na dia efa Ejipsiana ampijaliana aza izy ireo.
Ny endrik'i Ranad no singa lehibe amin'ny fanentanana firaisankina amin'ity bilaogera Sinai ity. Niparitaka manerana ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana  ny sarin'ny zanany vavy mihazona ny sarin'ny rainy, na sora-baventy mivaky hoe “Tiako hiverina hody i Dada“.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/25/133974/
 Wedna Ne3eesh: http://wednane3ish.katib.org/
 Bedouins ao Sinai: http://www.sheikhsalemhouse.com/bedouins.asp
 Mitantara ny fitsidihana: http://wednane3ish.katib.org/node/321
 fanentanana firaisankina : http://twitter.com/3arabawy/status/1506724237
 Niparitaka manerana ny tontolon'ny bilaogy Ejipsiana: http://www.gaberism.net/2008/06/10/free-mosaab/